नेकपाका ठुला नेता कांग्रेसमा प्रवेश गर्दै, देउवाले स्वागत गर्ने, सिलवाललाई तनाब !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
ललितपुर – ललितपुर जिल्लाका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा कार्यकर्ताहरू नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्न लागेका छन् ।
राष्ट्रिय जागरण अभियान अन्तर्गत शुक्रबार ललितपुरको लगनखेलमा हुन लागेको सभामा सत्तारुढ नेकपाका जिल्ला नेता रामकृष्ण हुमागाइँ नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्न लागेका हुन् । उनलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी प्रवेश गराउने कांग्रेसका युवा नेता मीनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए ।
एमाले पृष्ठभूमि भएका नेता हुमागाइँ ललितपुर जिल्लामा नेकपाका लोकप्रिय र चर्चित नेता हुन् । ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ मा उनले टिकट पाउने स्थानीयले अपेक्षा लिएका थिए ।
तर, नेपाल प्रहरीमा कीर्तेकाण्डमा विवादमा परेका नवराज सिलवाललाई टिकट दिएपछि हुमागाइँ असन्तुष्ट बनेका थिए । प्रतिनिधि सभाको टिकट नपाए पनि प्रदेशमा टिकट पाउने हुमागाइँले अपेक्षा लिएका थिए । तर, हुमागाइँलाई प्रदेशमा पनि टिकट दिइन ।
ललितपुर जिल्लाको तत्कालीन समयमा हुमागाइँ ०४९ र ०५४ मा बुखेल गाविसको अध्यक्ष जितेका थिए । हुँमागाइँ नेकपाका जिल्ला सदस्य समेत हुन् । तत्कालीन एमालेको जिल्ला अध्यक्षका लागि हुमागाइँले उम्मेदवारी दिएका थिए । हुमागाइँ अर्का प्रत्यासी मधुसुदन पौडेलसँग जम्मा दुई भोटले अध्यक्ष पदमा पराजित भएका थिए ।
एमाले र अहिले नेकपामा पेलानमा पर्दै आएका हुमागाइँले अन्ततः पार्टी छाड्ने निर्णयमा पुगेका छन् । हुमागाइँले नेकपा छाड्नेवित्तिकै आफ्ना सहयोगी साथीहरूसहित शुक्रबार नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्न लागेका हुन् । हुमागाइँसहित नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले पार्टीमा भित्र्याउने छन् ।
हुमागाइँ जस्ता राम्रा र ललितपुरका शक्तिशाली नेताले पार्टी छाड्दा नेकपाका सांसद नवराज सिलवालसहितका नेताहरूलाई धक्का पुग्नेछ ।